SanDisk® RescuePRO® Extreme Ukunikeza
Home → SanDisk® RescuePRO® Extreme Ukunikeza
Sicela ulandele izikhombisi-ndlela ngezansi ukulanda khulula yakho yokusebenzisa Yakha software RescuePRO®:
1. Ngezansi sicela ukhethe lapho isigqebhezana oyitholile ngekhadi lakho SanDisk Extreme.
>>>>Ukusikisela: isigqebhezana yakho kuyofakazela uthi RescuePRO® noma RescuePRO® Deluxe, ukukhetha ngendlela efanele.Uma une RescuePRO® SSD isigqebhezana, CHOFOZA LAPHA2. Sicela ukhethe enye yezinkinobho ngezansi ukuze uthole isigqebhezana oyikhethile oluhambisana uhlelo lakho lokusebenza.3. Sicela ubuyekeze LC Tech Ukuqalisa Process Umhlahlandlela ukuze uthole imiyalo yakho ekutholeni i ikhodi kusebenze usebenzisa RPRID inombolo yakho ye-serial.** Ngicela uqaphele: Should you have a coupon for RescuePro Deluxe with a serial number that begins with RPRID-0305,
Inombolo yomkhiqizo ukuthi libhalwe isigqebhezana yakho siphelile futhi ayilungile.You will then need to provide your complete RPRID-0305 inombolo yesiriyali SanDisk ukuthola esikhundleni. **
Uma uthole isigqebhezana nge yakho I-SanDisk® SSD mahhala 1 ngonyaka ukusebenza RescuePRO Deluxe for SSD, sicela ulandele izinkomba ngezansi ukulanda yakho khulula engu-1 kusebenze Yakha ka RescuePRO® Deluxe software SSD:
1. Ngezansi sicela ukhethe lapho isigqebhezana oyithole SanDisk yakho SSD.
>>>>Ukusikisela: isigqebhezana yakho khona oyothi RescuePRO® Deluxe.2. Sicela ukhethe enye yezinkinobho ngezansi ukuze uthole isigqebhezana oyikhethile oluhambisana uhlelo lakho lokusebenza.3. Sicela ubuyekeze LC Tech Ukuqalisa Process Umhlahlandlela ukuze uthole imiyalo yakho ekutholeni i ikhodi kusebenze usebenzisa RPSSD inombolo yakho ye-serial.** Ngicela uqaphele: Should you have a coupon for RescuePro Deluxe for SSD with a serial number that begins with RPDLX-0602,
Inombolo yomkhiqizo ukuthi libhalwe isigqebhezana yakho ayilungile.Kufanele uqale nge RPSSDYou will then need to provide your complete RPDLX-0602 inombolo yesiriyali SanDisk ukuthola esikhundleni. **RescuePRO® Deluxe for SSD
Uma usebenzisa i-Windows XP, CHOFOZA LAPHA i-XP ikhophi ehambisanayo of RescuePRO® Standard noma CHOFOZA LAPHA i-XP ikhophi ehambisanayo of RescuePRO® Deluxe.
Sicela ufake isofthiwe kukhompyutha, futhi uma ugijima it okokuqala, you will then be prompted to activate your software. Uyobe unikezwe isixhumanisi ekhasini kusebenze. Sicela ulandele isixhumanisi futhi ugcwalise ifomu, qiniseka ukuthi ufaka inombolo yakho ye-serial ukwenza kusebenze ikhophi yakho yamahhala ye-software RescuePRO®. Chofoza lapha ukuze uthole yesinyathelo ngesinyathelo Umhlahlandlela ukusebenza.